#iHateMoMo | Hamro Patro
AUGUST 2, 2015 / LENDAAI
ट्रक घ्याँच्च रोकियो । म सँगसँगै पछिल्तिर लहरै उभिएका सबै एकैपटक हुत्तिए । एउटो प्याच्च बोल्यो, ‘त्यस्का बाउ, बिस्तारै रोके हुन्न ?’
उसले ढालाको चरबाट एउटा आँखाले हेरी । बडेमानको भाँडो र त्यसबाट निस्किएको बाफ देखेर लख काटी— म:म: पाक्दैछ ।
कुमले घच्याउँदै सोधें, “खाने हो ?”
ऊ बोल्न सकिन । ज्यान फर्फराई । तनक्क तन्की । नाकमा सम्पूर्ण शक्तिले मुजा पारी र भनी, “नाइ यार, आई हेट म:म: !”
जेठको यो तातो रापले म:म: पाकेझैं गुम्सिएको थिएँ । त्यही धारोमा ठडिएर शिरदेखि पैतलासम्म भिजाउन मन लाग्यो । आङ फिँजाएर त्यही पानीमा आहाल बस्न रहर लाग्यो ।
तनक्क तन्किएर उठ्न खोजें, सकिनँ । अनि पो झसंग भएँ !
“यिन्ले राम्ररी सुत्न नि दिन्नन्,” च्याँठ्ठिएर बोली, “दबाई खाऊ भन्दा टेरे पो । आफूले त दु:ख पाएपाए, मलाईधरी सुत्न दिन्नन् ।“
“नआत्ते डसनी, परेको बेहोरम्ला,” मैले आश्वस्त पार्न खोजें, “हामीमध्ये जो सहर गए पनि छोरो खोज्ने है ?”
वरपर भाले बास्न थाले । चराहरू गुँड छाडेर उड्न थाले । मान्छेहरू कम्मरमा गाग्री बोकेर धारातिर हिँड्न थाले । पूर्वतिर अग्लो पहाडमाथि मिर्मिरे उज्यालो देखिन थाल्यो । क्षितिजपारिको उज्यालो हामीसामु नआउँदै काजी र तिघ्रेहरू गलल हाँस्दै ढोकाबाहिर निस्किए । काजीले औंलामा थुक लगाउँदै पैसाको मुठो गन्दै थियो । काजीसँग कानेखुसी गरेझैं एउटाले पुलुक्क हामीतिर हेर्‍यो र सोध्यो, “कुन हो ?”
यो संसारमा हामी दुईबाहेक हाम्रा कोही थिएनन् । अब म पनि उसलाई छाडेर जाने भएँ, ऊ एक्लै हुने भई । छोराको वियोगमा भक्कानिन्थी, मैले सम्हाल्थें । अब त म पनि हुन्न, कसको काँधमा टाउको राखेर भक्कानिओस् !
काजी र दुईजना तिघ्रे हामीछेउ आए । एउटाले काजीलाई सोध्यो, “नाम के हो ?”
काजी मुसुक्क हाँसेर भने, “हामीले हर्के भनेर बोलाम्चम् !”
म जोडले चिच्याएँ । सिंगो गाउँ जाग्नेगरी कराएँ र भनें, “नलैजाऊ न मलाई, डसनी एक्लै मर्छे … !”
अनि मेरा वरपर सल्बलाउनेहरू जाग्दै गए । मजस्तै त्यहाँ करिब २२–२५ बन्धक अरू थिए । सबै एउटै दिशामा उभिएका, ट्रकको पुच्छरतिर फर्किएका । बस्दा १० जना पनि अटाइँदैनथ्यो, लाइनमा उभ्याउँदा २२–२५ जना अटाइएछ !
“सिठ्ठी हाल्न सक्ने क्वै छ ह्याँ ?” पछाडिबाट कोही करायो ।
“साह्रै गाह्रो भयो यार, रोकाम् न । उभिने ताकत नि छैन !” ऊ ठसठसी कनेर फेरि बोल्यो ।
जोडले भित्तामा बजाउन पाए ड्राइभरले सुन्थ्यो पनि होला तर सबैका हात बाँधिएका थिए !
“हात खोल्न सक्ने भए यति दु:ख पाइन्थ्यो ?” ऊ झर्कियो, “मैले मात्रै खाने हो र ?”
“को झ्याँक्नी हो गाडी हल्लाउने ? झन्डै खाल्डामा गएन त्यसका बाउ,” ड्राइभर तुफानझैं आएर बम्कियो ।
“को हो भन्छौ कि यहीँ झारेर सप्को लाऊँ ?” ड्राइभर पाखुरा सुर्किंदै नजिक आयो ।
म ठ्याक्कै उसको सामुन्ने थिएँ । सबैभन्दा पहिले मेरै घाँटी अठ्याएर करायो, “तँ भन् त साला, कसले हल्लायो ?”
“राँडीका बान्, भोक लाग्यो भन्दैमा गाडी पल्टाउन खोज्ने ?” उसले मेरो देव्रे कन्चटमा मुड्की हानेको मात्रै सम्झन्छु, अरु केही याद छैन ।
“मलाई त कस्तो डर लागेको अघि,” नजिकै आएर बोली, “साह्रै दुख्यो ?”
“तपाईंको नाम के हो ?” मुखबाट फ्याट्ट निस्कियो ।
“केन आत्तिन्छौ घने दाइ ? हाम्ले नि छोड्याथिनम् । अब आइइगो, ल्याले त के गर्ने ?” गोथेले कोसिस गर्दै थियो ।
“यत्रो लाठे भएर नि मर्ने कुरो गर्चौ ? मरे त संसार सक्किगो, बाँचेर हाम्लाई बाँधी लैजाने पशुलाई ठेगान लगाउनुपर्छ,” गोथे बोल्यो ।
“बाँच्चेला र ?” घने लत्रिएर बोल्यो, “नत्र किन यसरी बाँधेर लैजान्ला’छन् त ?”
फेरि वरपर घुरेर हेर्‍यो र बाहिर मन्टो फर्काउँदै चिच्यायो, “गुरुजी तानम् ?”
त्यहाँ के हुँदैछ, कसैले अनुमान लगाउन सकेनन् । एउटा कुरा पक्का थियो– खलासीले हामीमध्ये कसैलाई ट्रकबाट झारेर लैजान खोज्दैछ । करेन्टले हुत्याएझैं पूरै तरंगित भयो मन– झननन्न !
एउटा बाइक दायाँबायाँ कुखुरा झुन्ड्याएर पश्चिमबाट भुर्रर आयो । ठ्याक्कै हाम्रै अघि रोक्यो र ड्राइभरसँग अदवले हात मिलायो । मेरा आँखा भने बाइकमा तुर्लुंग उल्टो झुन्डिएका कुखुरामा गएर अडिए टक्क । मार हान्न पानी छम्किएको खसीझैं सेकेन्ड–सेकेन्डमा टाउको फट्कार्ने कुखुरा देखेर मन बाउँडियो । मान्छे भएर जन्मिएपछि यो जगत्का हरेक प्राणीलाई जसरी चाह्यो, त्यसरी भोग्ने अधिकार कसले दिँदो हो ? मान्छेजति चेतनशील नहुँदैमा निम्छरा जनावरको बाँच्ने अधिकारै हुन्न ?
खलासीले एउटा फल्याक जमिनमा तेर्सो गरी अड्याएर बाटो बनायो । ड्राइभर र ऊ पालैपालो चढे । मेरो छेवैकी चनमतीको डोरी फुकाए र जोडले ताने । मेरो मनमा भयंकर सन्नाटा छायो । तर, चनमती प्रतिक्रियाविहीन चुपचाप फल्याकबाट ओर्लिई । ऊ झरेपछि खलासी फेरि चढ्यो र दोस्रो लहरबाट अर्कोलाई तानेर भुईंमा झार्‍यो अनि चनमतीलाई ठेल्दै फेरि गाडी चढायो । पहिलेझैं उसलाई टमक्क बाँध्यो र ढाला खाप्यो– १, २, ३ … !
“तिम्लाई किन झारेको ?” सुटुक्क कानैमा गएर सोधें, “मेरो त सासै अड्केला झैं भो एकछिन ।”
‘सिउँदो’ सुनेपछि मेरा हातमा जिरिंग काँडा उम्रिए ! घाँटीमा क्याप्प सास अड्कियो ।
यतिबेलासम्म बाहिर चकमन्न भइसकेको थियो । गाडीभित्र म कसैको अनुहार ठम्याउन सक्दिनथें । कोही कसैसँग बोलिरहेका पनि थिएनन् । सबैको मनमा एउटै डर थियो— अब कसको पालो ?
सबैभन्दा पहिले चनमतीलाई ताने अनि मलाई । म १२ घण्टापछि पहिलोपटक ट्रकबाट जमिनमा झर्दै थिएँ । सधै महत्ताहीन लाग्ने चिसो जमिन आज पहिलोपटक यस्तो प्यारो लागिरहेको थियो !
“त्यस्का बाउ, जब्बर राँगो परेछ, काजी सा’पले जतनले पालेका रै’छन्,” दुईमध्ये एक बोल्यो, “कसको म:म:मा पर्ने भो, हाहा ।”
“फेरि हान्दे, अब ढल्छ,” उक्साउँदै अर्को बोल्यो, “मलाई त यस्तै घिनलाग्ने देखेर नि बफ म:म: मन पर्दैन यार !”